Ukulahlwa kwenkunkuma, ziziphi iingxaki ezivelisa umoya, umhlaba namanzi? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Nuria | | Ikhaya eliGreen, Yendalo
Uyenza njani inkunkuma iyaqhubeka nokuba ngumba olindelekileyo kwizixeko ezininzi kwihlabathi liphela, ngakumbi kwezona ndawo zinabantu abaninzi ngenxa ye- umthamo omkhulu wenkunkuma eveliswa ngabemi bayo.
Ngokuchanekileyo ngenxa yokunqongophala kokulungiswa kwenkunkuma, ukulahla inkunkuma eqinileyo kuye kwaba yingxaki nzulu kakhulu kwiindawo ezininzi zeplanethi.
1 Iindidi zenkunkuma
2 Ukulahlwa kwenkunkuma eqinileyo kungcolisa umoya, umhlaba kunye namanzi
3 Ungcoliseko lomoya ukusuka kwindawo yokulahla inkunkuma
Inkunkuma ibandakanya amaqela amakhulu amathathu:
Izinto eziphilayo: inkunkuma yebhayoloji enje ngeziqhamo kunye namaxolo emifuno, iziqwenga zokutya, iphepha lezicwili (isilika, uboya kunye nomqhaphu). Zezi inkunkuma enokuthotywa.
Ezingaqhelekangaiiminerali kunye neemveliso zokwenziwa (isinyithi, iglasi, ikhadibhodi eyenziwe ngeplastikhi). Inkunkuma ye-elektroniki. Azinakuboliswa ziintsholongwane.
Ucoceko: inkunkuma yezixhobo zonyango esele zisetyenzisiwe (igeyile, iibhandeji, umqhaphu), iphepha langasese, napkins yococeko, izicwili kunye namanabukeni.
La Inkunkuma yococeko yeyona nto ixhalabisa kakhulu ezendalo kuba yiyo bacinga ngenkunkuma.
Inkunkuma yendalo inokuphinda isetyenziswe kunye nokuvelisa umgquba kwizityalo zeziqhamo kunye nemithi kunye nenkunkuma engaphiliyo iphantse ibe yi-100 yepesenti enokuphinda isetyenziswe.
Ngemigaqo-nkqubo yoluntu echanekileyo kunye nokwazisa uluntu ukuqonda ukubaluleka kokuhlelwa kwenkunkuma, inxenye yengxaki yokusingqongileyo iya kusonjululwa.
Inkunkuma engaphiliyo inokuphinda isetyenziswe iphinde isetyenziswe, kunye nezinto eziphilayo, zibe zizichumisi, umgquba owenziwe ekhaya okanye ukutya kwezinye izilwanyana.
Ukulahlwa kwenkunkuma eqinileyo kungcolisa umoya, umhlaba kunye namanzi
Kodwa eyona ngxaki inkulu yile ukuphatha inkunkuma yococeko nokuxuba zonke iintlobo zenkunkuma leyo iya kwiindawo ekulahlwa kuzo inkunkuma okanye kwiindawo ekulahlwa kuzo kwaye oko kuya kwenzeka de kube kugqityiwe ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma eqinileyo.
Ngeli xesha ukuhlala kunye kweentlobo ezininzi zenkunkuma kwi iindawo zokulahla inkunkuma ziya kuqhubeka zivelisa umoya, umhlaba kunye nongcoliseko lwamanzi ukwehla komgangatho wokusingqongileyo ngokubanzi, ngakumbi kwizixeko ezikufutshane neendawo zokulahla inkunkuma, ezidla ngokuba ziindawo ezinabantu abaninzi.
Ungcoliseko lomoya ukusuka kwindawo yokulahla inkunkuma
El umoya ungcoliswe ziigesi ivela ekonakaleni kwenkunkuma, kwinxalenye yayo, umgangatho Iyachaphazeleka xa inkunkuma ixutywa nayo kunye amanzi Iyatshintshwa xa inkunkuma ilahlwa ngqo kwiilwandle nasemilanjeni okanye xa iimvula zihlamba izinto ezinobungozi ezivelisa ukuphendulwa kwemichiza okwenzekayo xa inkunkuma idibana nomoya okanye nezinye izinto.
Xa kuveliswa ukubola kwenkunkuma Igesi yendlu eluhlaza njengoko zinjalo: UMethane (CH4), Initrous oxide (N20), Umoya omdaka (CO2). Eyokugqibela yeyona inobungozi ngenxa yetyhefu yayo nangenxa yokuba ihlala isemoyeni kangangeminyaka engamakhulu amahlanu.
Ezi gesi zinoxanduva lwe kutshintsha kwe mozulu njengoko zibambisa ubushushu obuveliswa yimitha yelanga kwaye zonyusa ukufudumala kwehlabathi (ukwanda kobushushu bomhlaba). Izazinzulu ziqikelela oko ubushushu bomhlaba unakho ukwanda phakathi ko-1,5 ukuya ku-5,5º ukuba ukukhutshwa kwegesi eluhlaza yendalo emoyeni akulawulwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Ukulahlwa kwenkunkuma
ugustina cabrera sitsho
Yintoni ebhadlileyo bendiyifuna namanzi
Phendula ku-agustina cabrera
UFranklin noJimi Abapapashi XNUMXth B sitsho
Abafundi bebanga lesithandathu B be-IE ACGR bakhuthazekile kwaye bathembisa ngokukhetha inkunkuma ukuze bangaqhubeki bengcolisa ikhaya lethu elikwiplanethi yomhlaba.
Phendula uFranklin noJimi Abapapashi XNUMXth B
kwaye sicela wonke umntu ukuba acinge ngayo kuba yingxaki enkulu esele isichaphazele
Isebenza njani i-injini yomoya okanye i-windmill?
I-Forestalia itshayela ifandesi evuselelekayo